Ihowuliseyili 500V 690V 125A Cylindrical Fuse Holders mveliso kunye nabenzi | IHawai
Ihowuliseyili 500V 690V 125A Cylindrical Fuse Holders
Ezi fuse fuse zixhasa iifyuzi ezinobungakanani ukuya kuthi ga kwi-22X58mm. Bayakwazi ukusebenza phantsi kobushushu obubangelwe kukulinganiswa kwangoku kunye nokulindelwa okufutshane okuchaphazela ngoku ukuya kuthi ga kwi-100KA. Ikwanokusebenza njengokucinywa kokucinywa komatshini ngokudibanisa ngokudibanisa izinto ezininzi. Kukho imigca emibini yoku / yokuphuma kwisiseko sefuse ye-RT18N, enika umsebenzi wokusika amandla. Uhlobo lwe-RT18L lunesitshixo sokhuseleko ekutshixeni isiphatho se-fuse xa sikhutshiwe ukunqanda ukusebenza okungalunganga; inokuxhotyiswa ngesalathiso, esiqhubeka xa uqhagamshelo lwefuse.
Ikaliwe ukuhambisa umbane ukuya kuthi ga kwi-690V; Ukusebenza kwamaxesha ama-50Hz AC; Eqhelekileyo yasimahla yokufudumeza umoya ngoku ukuya kuthi ga kwi-125A: Ukuthobela i-GB13539.1. I-GB13539.2, i-GB13539.6. GB14048.3 kunye ne-IEC60269-1, IEC60269-2, IEC60269-2-1, IEC947-3.
Emva kokuba iplastikhi efakwe kwityala leplastikhi ixhotywe ngoqhakamshelwano kunye nekhonkco lefyuzi, iziseko zenziwa ngokuwelda okanye ukurhangqa zombini ezinako ukwakhiwa ngobuninzi. I-RT19 zizinto ezivulekileyo, kwaye ezinye zizinto ezifihlakeleyo. Kukho ubungakanani be fuse ezintlanu ezikhoyo onokukhetha kuzo kwisiseko esinye se-fuse se-RT18N, i-RT18B, kunye ne-RT18C. Zimbini iiseti zemigca yokuphuma ye-RT18N. Enye ifakwe kwiifayile zefuse zesayizi ngokobungakanani. Olunye unxibelelwano oluvulekileyo olusisigxina olunamanqaku aphule kabini. Iyunithi yesiseko iyonke ingasika amandla. Iziseko ze-RT18 zonke ziloliwe ze-DIN ezifakiweyo, phakathi kwazo i-RT18L ixhonywe ngokhuseleko lokhuselo ngokuchasene ne-ope-ration engalunganga kwimeko yokwaphuka.
Egqithileyo Ihowuliseyili 1P 2P 3P 4P DC mini breaker breakers mcb dc breaker dc mcb solar
Okulandelayo: Ulawulo lweshishini IEC IP43 300A uhlobo c ukusikwa komnini wefuse yefriji
Ulawulo Industrial ombane aphezulu Ukuyeka fuse c ...
Ulawulo Industrial IEC IP43 300A uhlobo c cutout ...